Ntugharị: ihe ọ bụ, njirimara na ọzụzụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu n'ime ihe gbasara ihu igwe nke nwere ike imetụta ụgbọelu bụ ichi. Ọ bụ nkwụnye ice na ụgbọ elu ahụ ma mepụta ya mgbe mmiri mmiri gbazere agbaze oyi mgbe ọ kụrụ ya.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, mbido na mkpa icing.
1 Gịnị bụ icing
2 Nchedo megide icing
3 Ihe na-akpali
4 Shapesdị nhazi
Gịnị bụ icing
Anyị na-ekwu maka mmetụta ihu igwe nke na-eme n'akụkụ elu nke ikuku na nke nwere ike imetụta ụgbọ elu ahụ mgbe ọ gafere ebe ndị a. N’ime ihe ịtụnanya a, akpụrụ mmiri na-agbasosi ihe ike ikuku ikuku. Ihe niile na-apụta na ụgbọ elu nwere ike gbanwee n'ihi icing.
Ka anyị lee ihe mgbanwe ndị bụ isi nwere ike ibute icing na akụkụ ndị sitere na sel ụgbọ elu:
Belata visibiliti. Ọ bụrụ na ice ahụ agbasoro akụkụ ụfọdụ, ụgbọ elu ahụ nwere ike ime ka mbelata visibiliti dị obere na ọkara.
Mgbanwe nke ihe aerodynamic: Mgbe ihe eji ebu njem bụ ikuku, ikuku aerodynamic dị mkpa maka iji mmanụ ọkụ rụọ ọrụ nke ọma. Ice nwere ike ịmepụta ọgba aghara na ikuku ụgbọ elu.
Ibu ibu: ụgbọ elu ahụ nwere ike ịnwe mmụba dị arọ dabere na ice fọdụrụ n'ihi ihu.
Ike ọnwụ: ọ bụ nsonazụ dị arọ nke uru bara ụba. Ka arọ ahụ na-abawanye, ụgbọelu na-efunahụ ike nke nta nke nta.
Omume ọma: Nkwụsị ndị a na-aga n'ihu n'ihu nwere ike ime ka ike gwụ ike na ihe niile nke ụgbọ elu ahụ.
Anyị maara na icing n'ụgbọ elu nwere ike ime na igwe ojii, alụlụ ma ọ bụ igwe ojii. Ihe niile dabere na ọnọdụ gburugburu ebe obibi nke a na-ahụ n'oge ahụ. O nwekwara ike ime n'ime mmiri ozuzo. N’okwu a, a na-akpọ ya mmiri oyi.
Nchedo megide icing
Ihe mbụ ị ga - ama iji chebe onwe gị pụọ na icing bụ ịmata ebe ndị ahụ na - eme ọtụtụ oge. Ọ bụ ihe amamihe na-adịghị na-efe efe na ebe Ọnọdụ ihu igwe dị mma maka ịkpụ akpụ. Otu ụzọ iji chebe megide ihe a bụ inwe ihe akpụrụ akpụ nke na - enyere aka wepu ihe ọ bụla gbakọtara. Agbanyeghị, usoro nchebe a dị oke ọnụ karịa ebe ọ bụ na a ga-etinye ya n'ime ụgbọ elu ahụ.
Enwere akụrụngwa na-eme ka ikuku zere ịmalite otu ihe ma ghara ikwe ka ọ rapara na elu. Usoro ndị a nwere ike ịbụ ụdị dị iche iche:
Mechanics ntekwasa: Ha bụ ndị nwere ihe mkpuchi matic nke, mgbe ekponyere ikuku na injin, na-agbaji ice. A na-ejikarị ha eme ihe na algae na ọdụ ọdụ.
Kwes: Ha bụ ndị na-ekpo ọkụ eletrik nwere ike iji mee ihe na pipụ Pitot. Ha bụkwa ndị na-ekpo ọkụ ikuku nke enwere ike iji ya na ihu mmiri, na propela, na carburetor na ọdụ ọdụ.
Chemicals: Ndị a bụ baths dị iche iche nke eji ihe na-enyere aka mee ka mmiri subcooled dị na mmiri mmiri. Ihe kachasị dị mma bụ na a na-eji iko windshield eme ihe ugboro ugboro na ndị na-ere ihe.
Ka anyi nyocha ihe bu ihe butere icing. Nke mbụ, a chọrọ mmiri mmiri mmiri mmiri, na ọnọdụ ikuku dị oke ala (ihe kachasị mma bụ na ọ dị n'okpuru efu) yana ọnọdụ dị elu nke ụgbọ elu ahụ dịkwa n'okpuru efu. Nnukwu tụlee nwere ike ịdị ya mere n'ime igwe ojii na okpomọkụ nke -2 na -15 ogo na obere ụmụ irighiri mmiri achọtara na okpomọkụ nke -15 na -40 ogo.
Fọdụ n'ime ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị mma maka ọgbọ nke icing bụ ntụgharị na ọkwa dị ala na enweghị nsogbu ikuku. N'oge nsogbu ikuku, oke ịrị elu nke mmiri ọkụ na-adịkarị, nke, mgbe ha jikọtara ya na oke mmiri oyi, na-ewepụta igwe ojii na-emepe emepe. Ego nke ikuku oyi n'ogologo na-akwado mmeghari uzo na mmepe nke igwe ojii na enweghi nsogbu.
Gafe usoro sistemụ nke nwere ikuku dị elu na-ebutekarị icing. Dabere na mpaghara ebe ụgbọ elu ahụ na-agafere, mmetụta a nwere ike ọ ga - eme ma ọ bụ obere karịa. Dịka ọmụmaatụ, ugwu ugwu na-amasịkarị ikuku elu ma na-atụnye ụtụ na mmụba nke mmiri ụmụ irighiri mmiri na-aghọ igwe ojii. Nke a na-eme ka ihe puru omume nke icing. Mmetụta nke osimiri dị nnọọ ka mmetụta asụsụ. Ikuku iru mmiri nke na-esi n’oké osimiri na-erute ogo odide mgbe ịrị elu ya na-abawanye. Ozugbo ogo dị elu, a na-emepụta ọdịnaya dị elu nke mmiri mmiri na ígwé ojii na ihe gbasara nke puru omume nke icing na-abawanye.
Ka anyi nyochaa ihe bu udiri ala icing di:
Granulated ice: Ọ bụ ọcha, opaque, porous ice na-abịa dị nnọọ mfe. A na-akpụkarị ha na okpomọkụ dị n'etiti -15 na -40 ogo tumadi site na obere ụmụ irighiri mmiri. Usoro nke ịkpụ ụdị ice granulated a na-eme ngwa ngwa.
Akpụrụ ice: ọ bụ ụdị ice nke doro anya, nghọta, dị larịị ma nwee nnukwu nsogbu. A na-akpụkarị ya na okpomọkụ dị n'etiti -2 na -15 ogo na maka ọtụtụ akụkụ a na-akpụ site na nnukwu ụmụ irighiri mmiri. Usoro nke ịkpụkọta ụdị ice a na-eme nwayọ nwayọ. Ma nke bụ eziokwu bụ na tụlee nwere ike igba ntakịrị tupu oyi kpọnwụrụ. N'ụzọ dị otú a, elu oyi na-abawanye. Flowgba ọsọ nke ugbu a gburugburu nku nke ụgbọ elu ahụ nwere ike ịda mbà n'obi karịa ụdị ice gara aga.
Mmiri na-ajụ oyi: ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị dị ize ndụ dị adị. Ọ bụ icing dị oke egwu na ụgbọ elu. Ma ọ bụ na ice ahụ bụ transperent na mmiri ozuzo na-arụ ọrụ n'otu ụgbọelu. Ihe profaịlụ nke okpomoku nke di elu nke nwere otutu ihe di nma kari nhazi mmiri ozuzo.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere icing na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Cinggba ume